Kazakhstan oo Soomaaliya soo gaarsiineyso gargaar bani’aadanimo | POHSOMEV.COM
Kazakhstan oo Soomaaliya soo gaarsiineyso gargaar bani’aadanimo
posted by admin on Wed, 01/17/2018 - 16:31
Addis Ababa ( Sh. M. Network )-​Safiirka Dowladda Kazakhstan u fadhiya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyo madaxa nabad gelyada iyo ammaanka Midowga Afrika ayaa gaaray heshiis gargaar bani’aadanimo lagu gaarsiinayo Soomaaliya.
Dowladda kazakhastan ayaa ku wareejisay Ururka Midowga Afrika Lacag gaareyso 215,000 oo Dollar-ka Mareykanka ah taas oo loogu tala galay in wax loogu qabto, sidii Biyo Nadiif ah ay ku heli lahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan koonfurta Soomaaliya iyo gobalada ka howlgalaan Ciidamada AMISOM.
Safiirka Kazakhstan ee dalka Ethiopia Yerlik Cali ayaa sheegay in wafdi ka socda Dowladdiisa ay tagi doonaan Soomaaliya, si u soo kormeeraan mashaariicda lagu qabtay lacagaha deeqdaha ah oo ay ugu talo galeen in dadka ay ku helaan Biyo nadiif ah oo ay cabaan.
Kazasakhstan ayaa sheegtay in deeqaha gargaarka ah ee ay ugu tala gashay Soomaaliya ay u sii marin doonto Ururka Midowga Afrika oo Ciidamo nabad ilaalin ah ay ka joogaan Soomaaliya.
Yerlik Cali ayaa xusay in ay mashaariic kala duwan ay ka sameyn doonaan deegaanada ay dhibaatooyinka xoogan ka geysteen Xarakada Al Shabaab ee koonfurta Soomaaliya.
Ururka Midowga Afrika ayaa si weyn u soo dhaweeyay doorka ay Dowladda kazakhastan ka qaadeyneyso in gargaar la gaarsiiyo qaar ka mid shacabka Soomaaliyeed ee saameynta ku yeesheen colaadaha ka taagan Soomaaliya.
The post Kazakhstan oo Soomaaliya soo gaarsiineyso gargaar bani’aadanimo appeared first on Shabelle.